Atoobiya oo Laanhaado Saaran – Rasaasa News
Atoobiya oo Laanhaado Saaran
Jijiga, Apr 28, 2014 – Xukuumada Atoobiya ka jirta waa kali talis, awooda dalka oo dhana waxay gacanta ugu jirto ururka Tigray [TPLF].
Aduunka waxaa loo sheegaa in Atoobiya ay ka jirto sinaa iyo cadaalad dadku ku doortaan cida ay rabaan, EPRDF-na tahay xisbiga loo doortay hogaanka dalka, kuna midaysan yihiin afar xisbi siyaasadeed.
Shaki kuma jiro in xiliga ay doonto ha qaadatee xukuumad kali talis ah ay si xun u burburi meel kasta oo ay aduunka ka jirto.
Awooda kali talisnimo ee Atoobiya waxaa hogaankeeda lahaa Meles Zenawi, kaas oo geeriyooday 2012. Waxaa Raysal wasaare laga dhigay Desalegn oo uu hore u diyaariyey Meles Zenawi, waxaana kursiga ku ilaaliya ururka TPLF.
In kasta oo uu jirto isbadal koboc dhaqaale, hadana dadwaynaha reer Atoobiya kuma faraxsana kalitalisnimada ururka TPLF ku maamulo wadanka.
Xiliga doorashada la qabto waxaa ka dhiman sanad, waxaana bilowday cadaadis xoog leh oo ay TPLF ku doonayso in doorashada ka hore cid walba ay meel ku hubsato, si aanay u dhicin waxayna jeclayn. Taa waxaa dhinac socda diyaargaro xoog leh iyo diidmo ay dadwaynuhu ku diidayaan cadaadiska xooga leh ee la saaray. Ururada mucaaradka ayaa wada tilaabooyin siyaasadeed, iyaga oo kaashanaya aduun waynaha tusayana in Atoobiya ayna dimoqraatiyada ka jirin.
Nasiib darada ka jirta Atoobiya ururka TPLF, umana diyaarin dalka mudadda 25-ka sano ah ee uu haystay sharci cadaalad ku dhisan oo wax lagu doorto.
Sanad baa ka dhiman xiliga doorashada, waxaana muuqda xusul duub colaadeed iyo xukun kala ridasho aan dimoqrtaatiyad ku dhisnayn.
Cadaadiska iyo af gacan saarka ayaa xoog uga sii kordhaya Atoobiya, kaas oo galay dhinac walba oo ka mid ah nolosha dadwaynaha ah. Xadhiga ay teknoolajiyadu sababta u tahay ayaa meel walba galay, dadka badan koodu way ka caageen isticmaalka telefoonka, ka dib kolkii ay hayado caalmi ah sheegeen sida loo dhagaysto isgaadhsiinta Atoobiya. Cadaadiska iyo gacan ku maamulka ayaa gaadhay dibada, iyada oo la isticmaalay kumbuyuutaro dad asal Atoobiyan oo haysta dhalasho reer galbeed ah.
Todobaadkan waxaa la xidhay sagaal , warfidiye oo madax banaan, waxaa hore u xidhnaa tiro warfiyeyaal ah oo badan. Waxaa kale oo laga dhigay qaar la xidhay iyo qaar xabsi guri ku jira ururada mucaaradka sharciyeysan.
Banaanbax fariin ah oo ay dhigayaan dadka reer Atoobiya, ayaa maanta April 28, 2014 ka dhacaya Washinton DC, taas oo loo dhiibayo John Kerry oo booqanaya Addis Ababa barito 29/4/2014. ddis Abab, labadii maal mood ee ugu dambeeyey April 26, 27, waxaa ka dhacaya banaanbax looga soo horjeedo ficilada ay qaadayso dawladu.
Ismaamulka Canfarta, oo ah meelaha dawladu aad isugu halaynayso, waxaa ka taagan qalalaase lagu diidan yahay dawlada, waxayna Booliska Atoobiya dharaar cad toogteen 12 shacab ah April 21, 2014.
Booqashada John Kerry, waxay la xidhiidhaa sidii uu ugala hadli lahaa hogaanka Atoobiya in uu wax ka badalo cadaadiska xad dhaafka ah ee ka jira wadanka, laguna soo dabaalo dimoqraatiyada dalka. Taas oo aan hubo in ayna waxba ka badalayn hanaanka siyaasadeed ee uu ku socdo ururka TPLF.
Astaamaha loolanka siyaasadeed ee ka jira Atoobiya, waxaa laga filan karaa xumaan iyo samaan labadaba.
Suul faro kuma tirsana, sidee ayey Somalida u saamayn doontaa siyaasada ka socota Atoobiya xumaan iyo samaan? Waxaan kaga jawaabi doonaa Qormo labaad.
Liyuu Boolis: Dhimasho Doofaar